လက်ရှိမြန်မာ့ဈေးကွက်မှ လုပ်ငန်း ၁၀၀ ကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
False စီးပွားရေး နိုင်ငံတကာ၊
May 1, 2020 May 1, 2020 နေရာမောင်LeaveaComment on လက်ရှိမြန်မာ့ဈေးကွက်မှ လုပ်ငန်း ၁၀၀ ကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား
အနည်းဆုံး လုပ်ငန်း ၃ ခုလောက်က ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာကြေညာပြီးတဲ့နောက် “လက်ရှိမြန်မာ့ဈေးကွက်မှ လုပ်ငန်း ၁၀၀ ကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ ရွှေ့ကြောင်း ကြားလိုက်ရသည်”ဆိုတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တာအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ ပို့စ်ရဲ့အောက်ခြေမှာ ကိုရီယားနိုင်ငံက လုပ်ငန်း ၁၀၀ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့လိုကြောင်းပြောကြား တယ်ဆိုတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းဌာနတစ်ခုက သတင်းကိုလည်းဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်။
ဒီလို ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ သတင်းပျံ့နှံ့ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးအောင်နိုင်ဉီးက “ဘာ​ကြောင့်မှန်းမသိ လုံဝဥသုံမမှန်တဲ့ သတင်း​ဟောင်းတစ်ပုဒ် ဒီ​နေ့ပြန်​ပေါ်လာ​တော့ ကိုရီးယားစက်ရုံ ၁၀၀ မြန်မာပြည်က​နေ ဘင်္ဂလား​​ဒေ့ကို ​ရွှေ့မယ်ဆိုတာမှန်သလားလို့ မီဒီယာများက​ ဝိုင်း​မေးကြပါတယ်.. မမှန်ပါဘူးလို့ဘဲ ကျ​နော် ​ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်…ကျ​နော့ဝန်ကြီး ဒီမနက် တွစ်တာမှာ​ရေးလိုက်တာက ကျ​နော့​ဖြေကြားချက်ကို ပိုပြီးအားဖြည့်သွားတာ​ပေါ့ဗျာ”ဆိုပြီးရေးသားထား တာတွေ့ရပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အလားတူပဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးသောင်းထွန်းကလည်း ကိုရီးယား-မြန်မာပေါင်းစည်းမှုက အားကောင်းလှပြီး ကိုရီးယားလုပ်ငန်းတွေဟာ အာရှရဲ့ နောက်ဆုံးဈေးကွက်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတွေ လျင်လျင်မြန်မြန်တိုးတက်နေပါတယ်ဆိုပြီး ဧပြီ ၃၀ ရက်က တွစ်တာမှာ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Korea -Myanmar ties are strong! Korean firms remain bullish on “Asia’s last frontier”. This is reflected in set -up of KOREA MYANMAR INDUSTRIAL COMPLEX in Yangon. Donation of high capacity COVID-19 test equipments by2Korean banks, IBK and KM yesterday underscore the close ties pic.twitter.com/rORRz7Scov
— Thaung Tun (@ThaungTun20) April 30, 2020
ကိုရီးယားနိုင်ငံက လုပ်ငန်း ၁၀၀ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့သွားကြောင်းအခုလို ဖေ့စ်ဘွတ်မှာပျံ့နှံနေတဲ့ သတင်းတွေမှာ အဓိက ကိုးကားရေးသားနေကြတာဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခြေစိုက် bdnews24.com ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကရေးသားထားတဲ့ “မြန်မာနိုင်ငံက ကိုရီး ယားလုပ်ငန်း ၁၀၀ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို ပြောင်းရွှေ့လို”လို့ ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်မယ့် သတင်းဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းဌာနက ဒီသတင်းဖော်ပြပြီးနောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက လုပ်ငန်းတွေ ပိတ်သိမ်းပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို ပြောင်းသွားတာမျိုးမရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်က အတွင်းရေးမှူး ဉီးသန့်စင်လွင်က မြန်မာတိုင်းမ်သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့တဲ့ သတင်းကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်တွေအရ မြန်မာနိုင်ငံကနေ လုပ်ငန်းတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားမရှိတဲ့အတွက် “လက်ရှိမြန်မာ့ဈေးကွက်မှ လုပ်ငန်း ၁၀၀ ကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ ရွှေ့ကြောင်း ကြားလိုက်ရသည်”ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်ဟာ သတင်းမှားဖြစ်ပါတယ်။
Title: လက်ရှိမြန်မာ့ဈေးကွက်မှ လုပ်ငန်း ၁၀၀ ကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား
Tagged BangladeshKorean InvestmentMICMyanmarSocial MediaYangon
May 16, 2022 May 16, 2022 နေရာမောင်